Madaxa UNFPA ee Soomaaliya oo maanta booqday Puntland”sawiro” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 8-2-2015 si wadajir ah u qaabilay Agaasimaha cusub ee Hay’adda UNFPA ee Soomaaliya Mr.Francois Farah Michel iyo wefti uu hogaaminayey.
Weftiga la socday Mr.Francois Farah Michel ee soo gaaray Puntland waxaa kamid ah ku xigeenkiisa Mrs.Kyeyune, agaasimihii hore ee hay’adda UNFPA ee Soomaaliya Mr.Cheikh Tidiane Cisse iyo masuuliyiin katirsan xafiiska hay’adda UNFPA ee Puntland.
Kullan gaar ah oo Madaxweyne Gaas la qaatay masuuliyiintaasi ayaa waxaa uu marka hore siweyn Puntland ugu soo dhaweeyey agaasimaha cusub ee Hay’adda UNFPA ee Soomaaliya Mr.Francois Farah Michel oo dhawaan si rasmi xilkaasi ula wareegay.
Mr.Francois Farah Michel ayaa isna dhankiisa Madaxweynaha uga mahadceliyey sida wanaagsan ee uu usoo dhaweeyey, isagoona sheegay in Hay’adda UNFPA dardar gelinayso howlaha horumarineed ee ay ka wadaan gudaha Puntland.
Hirgelinta Barnaamijyo cusub oo horumarineed ayaa madaxda Hay’adda UNFPA ee soomaaliya balan qaadeen inay ka fulinayaan Puntland maadama ay tahay dhul nabad ah shacabkuna ay yihiin kuwo ay ka go’antahay ka faa’iidaysiga barnaamijyada horumarineed.
Madaxweyne Gaas ayaa ugu dambeyn Mr.Francois Farah Michel kula dardaarmay in Hay’adda UNFPA adeegyadeeda horumarineed ay si siman uga hirgeliso guud ahaan Puntland gaar ahaana gobolada laamiga ka baxsan.
RW. Cumar: “Go'aanka Bangiyada Maraykanku waxay horseedi karaan dhibaato kale oo bini’adamnimo oo dalka soo food saarta”